Kumuu ahaa Maamulihii laanta Hormuud ee duqeynta lagu dilay? | Dalka Times - News and Politics
Home SO WARKA Kumuu ahaa Maamulihii laanta Hormuud ee duqeynta lagu dilay?
Image captionCabdifatax Barre Maxamuud, oo ay ilo-adeero ahaayeen ninka la dilay
“Wax badan ayaan ka qaannaa Maxamuud. Waa walaalkey iga weyn. Wuxuu ahaa nin hal-door ah, oo Soomaali ah, oo dadka wax badan usoo qabtay. Taariikhdiisa ugu dambeysay haddaan wax ka sheegana, Maxamuud wuxuu ahaa nin u shaqeyn jiray hay’adaha, gaar ahaan MSF. Wuxuu ku dhashay kuna koray magaalada Jilib, halkaasoo aad looga yaqaanno, haddana muddo sannado badan ah wuxuu u shaqeynayay shirkadda Hormuud Telecom Soomaaliya”, ayuu yiri Cabdifataax.
“Waxaa loo baahan yahay in qofka muwaadinka Soomaaliga ah aan lagu sheegin wax uusan ahayn, ninkaas sal iyo raad kuma lahayn waxaas, qof u sameysan noocaasna maba ahayn, ururna shaqo kuma uusan lahayn. Wuxuu ahaa nin gacansade ah oo shaqeysta kana tirsan shirkadda Hormuud, shirkaddaasna Al-Shabaab ma aha, xiriirna lama laha”, ayuu yiri.
Howlihiisa kale ayuu sheegay inay ka mid ahaayeen beeraha, wuxuuna yiri: “Sida ay dadkoo dhanba ogyihiin, meesha lagu weeraray waxay ahayd beertiisa, waa nin beeraley ah. Waxaan ka codsanayaa dadka walaalkey waxaas ku sheegay inay Alle ka baqaan”.
Lahaanshaha sawirkaHORMUUD TELECOM
Image captionHormuud ayaan wali war rasmi ah kasoo saarin mas’uulka ka tirsanaa ee duqeynta lagu dilay